Dhamma Yanant: ပေးဆပ်သူများ
10:06 AM | Author: Dhamma Yanant
မိဘ၊ ဆရာသမား စတဲ့ အနန္တော အနန္တ ကျေးဇူးရှင်များအပေါ် တချို့ တချို့ရဲ့ ခံယူချက်ကလေးတွေ နည်းနည်း လွဲနေသလားလို့ပါ။ မိဘဆရာသမားတို့ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပြည့်စုံနေလို့၊ သူတို့က မပြည့်စုံလည်း သူတို့ကို ထောက်ပံ့ကူညီနေသူတွေရှိနေလို့၊ ပြုစုမယ့်သူတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေလို့ ကိုယ်ကလှည့်မကြည့်မိတာမျိုး။ အဲဒါလေးတွေပါ..။ မိမိကို ပေးထားကြသူတွေကို မိမိက ပြန်မဆပ်မိသေးတာမျိုးပါ။
တချို့က ငွေအား မတတ်နိုင်လို့၊ တချို့က လူအား မတတ်နိုင်လို့။ အဲဒီလို “မတတ်နိုင်လို့” ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် ပေးတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် ကိုယ်တတ်နိုင်တာ တစ်ခုခုတော့ ရှိမှာပါ။ ငွေကြေးပစ္စည်း မထောက်ပံ့နိုင်ရင် လူကိုယ်တိုင်သွားပြီး ပြုစုတာမျိုး။ လူကလည်း မအားရင် ဖုန်းဆက်တာမျိုး၊ စာရေးတာမျိုး၊ စကားကြုံပါးတာမျိုး စသဖြင့်... ကြံဖန်ပြီး ဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင် အများကြီးပါ။
မိဘဆရာသမားတွေ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ ကျန်းမာသည်ဖြစ်စေ မကျန်းမာသည်ဖြစ်စေ ကြီးငယ်မဟူ သူတို့မှာလည်း လိုအပ်ချက်တွေ၊ လိုလားချက်တွေဆိုတာ ရှိနေမှာပါ။ မရှိဘူးပဲထားဦးတော့။ ကိုယ့်သားသမီး၊ တပည့်တွေကို တွေ့ရမြင်ရရင်၊ သတင်းလေးတွေ ကြားနေရရင် ဝမ်းသာနေကြတာ အမှန်ပါပဲ။ မိဘဆရာသမားတွေအနေနဲ့ သားသမီးတပည့်တွေကို လူတစ်လုံး သူတစ်လုံးဖြစ်အောင် ကျွေးမွေးထောက်ပံ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတာဟာ တစ်ချိန်မှာ ဘာတွေပြန်ယူမယ်ဆိုတဲ့ ရလိုမှု အကြွေးသဘောမျိုး လုံးဝမရှိပါဘူး။ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာရံတဲ့ မေတ္တာစိတ် သန့်သန့်လေးနဲ့ ပေးခဲ့ကြတာပါ။
သားသမီးတပည့်တွေ ဒုက္ခကြုံတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရသလို မှတ်ယူခံစားပြီး လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း ရှာဖွေပေးတာ၊ ချမ်းသာနေတဲ့အခါမှာလည်း မုဒိတာအပြည့်နဲ့ ရလိုမှုမပါ ၀မ်းမြောက်ပေးတာ၊ အပြစ် ချို့ယွင်းချက်တွေရှိရင်လည်း နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးတတ်တာ။ ဒါတွေနဲ့ ပြည့်စုံတာကိုက မိဘဆရာသမားတို့ရဲ့ မေတ္တာစစ်ပါ။ ဒီလို လိုအပ်တဲ့ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာတွေ ရံထားတဲ့ မေတ္တာမျိုးကိုသာ မေတ္တာစစ်လို့ ခေါ်နိုင်ပါမယ်။ ဒီလိုမှ မရံနိုင်ရင်တော့ ပါးစပ်က မေတ္တာတွေ ဘယ်လောက်ကြီးပဲ အော်ပြီးပို့နေပါစေ၊ အတုကြီးပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
မိဘဆရာသမားတို့ရဲ့ မေတ္တာဟာ သိပ်ကို အစွမ်းထက်ပါတယ်။ လိပ်မကြီးဟာ အဝေးကနေ မေတ္တာဓာတ်တွေ လွှတ်ပေးရုံနဲ့ လိပ်ကလေးတွေ ပေါက်လာပြီး လိပ်မကြီးသေသွားရင် လိပ်ဥလေးတွေဟာ အကောင်မပေါက်တော့ဘူးဆိုတာ ကြားဖူးကြမှာပါ။ တိရစ္ဆာန်မိခင်ရဲ့ မေတ္တာတောင် ဒီလောက်စွမ်းအားကြီးရင် မိမိတို့ရဲ့ မိဘဆရာသမားတွေရဲ့ မေတ္တာဟာ ဘယ်လောက် တန်ခိုးကြီးလိုက်မလဲ။ သားသမီးတို့ကို မြင်ရ၊ သတင်းတွေကို ကြားရတဲ့အချိန်မှာ သာမန်အချိန်တွေမှာ ထားတဲ့မေတ္တာထက် ပိုပြီး မေတ္တာပွါးမိကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ လွှင့်တဲ့သူက လွှင့်ပေးပေမယ့် ခံတဲ့သူဘက်ကလည်း မိအောင်ဖမ်းတတ်ဖို့ အရေးကြီးလှပါတယ်။
မိဘဆရာသမားတွေရဲ့ မေတ္တာဟာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန အရောင်မခြယ် ကြည်လင်သန့်ရှင်းလွန်းလို့ တချို့များဆို ထူးပြီးတော့တောင် မမြင်တတ်ကြပါဘူး။ သူတို့မွေးထားတာပဲ ကျွေးပေါ့၊ သူတို့ လခယူထားတာပဲ သင်ပေါ့ ဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့လေး တွေးမိကြပါတယ်။ သတိထားရမှာက ဖန်ဂူကို ရှိမှန်းမသိ တအားခုန်အုပ်လို့ သေကြေဒုက္ခရောက်ရတဲ့ ခြင်္သေ့ကို သင်ခန်းစာယူဖို့ပါ။ မိဘဆရာသမားတို့ရဲ့ မေတ္တာဖန်ဂူကြီးကို သတိမမူ ဂူမမြင်လို့ ၀င်တိုက်မိရင်တော့ မိမိတို့ပဲ ဒုက္ခရောက်ရမှာပါပဲ။
သူများတွေ ထောက်ပံ့စောင့်ရှောက်တာ မစောင့်ရှောက်တာ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်စောင့်ရှောက်မှ၊ ကိုယ်သိတတ်မှ ကိုယ်ကုသိုလ်ရမှာပါ။ (ဥပမာ- ထမင်းဆိုရင် သူစားနေတာပဲ၊ ကိုယ်စားစရာ မလိုပါဘူးလို့ မတွေးမိသလိုမျိုးကို ဖြစ်ရပါမယ်။) မိဘဆရာသမားတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကုသိုလ်ကို မိဘဆရာသမားတို့ ရှိတုန်းမှာဘဲ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရှိတုန်းမှာ ဂရုစိုက်မိဖို့ လိုပါတယ်။ မရှိတော့တဲ့သူတွေကလည်း မိမိတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မိဘအရွယ်ရှိသူတွေကို မိဘတွေလို သဘောထားဆက်ဆံလို့ ရတာပါပဲ။ သံသရာမှာ ဆွေမျိုးမတော်ဘူးသူဆိုတာ မရှိဘူး မဟုတ်လား။ ဆရာသမားတွေဆိုတာလည်း အိုကြီးအိုမအရွယ်မှာ မပြည့်မစုံနဲ့ ပီတိစားနေကြရသူတွေ ခပ်များများပါ။ တပည့်တွေရဲ့ ကောင်းသတင်းလေးတွေကြားပြီး ကျေနပ်ဗိုက်ပြည့်နေကြရတာပါ။ သူတို့ပေးခဲ့တာတွေက အတိုင်းမရှိ ကြီးမားပေမယ့် ကိုယ်ဆပ်လိုက်တဲ့ သိတတ်မှုသေးသေးလေးနဲ့တင် အလွန်ကို ကျေနပ်ဝမ်းသာနေတတ်ကြတာပါ။
သားသမီး၊ တပည့်တွေ ဝတ္တရားကျေပွန်တာဟာ ပေးကမ်းထောက်ပံ့ခြင်း (ဒါန)၊ ပြုစု စောင့်ရှောက်ခြင်း (သီလ)၊ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ ထားခြင်း(ဘာဝနာ) တရားတွေ တိုးပွားနေတာပါပဲ။ သူများကို ဖြည့်နေပေမယ့် တကယ်တော့ ကိုယ်ပြည့်နေတာပါ။ ဒီလို နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိစေအတွက် မိဘ၊ ဆရာသမား၊ ကျေးဇူးရှင်များနှင့် ပတ်သက်လာရင် သူတို့ပြည့်စုံနေလည်း (မလိုလည်းဘဲ) ကိုယ့်ဘက်က နောင်တစ်ချိန်မှာ နောင်တရမကျန်ရလေအောင် ပေးခဲ့ကြသူတွေကို ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပြန်ဆပ်လိုက်ကြပါစို့လား.....။
This entry was posted on 10:06 AM and is filed under article . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.